Maraykanka oo u digay muwaadiniintiisa ku sugan Addis Ababa - Halbeeg News
Maraykanka oo u digay muwaadiniintiisa ku sugan Addis Ababa
Addis Ababa (HALBEEG) – Dowladda Maraykanka ayaa u digtay muwaadiniinteeda ku sugan magaalo madaxda dalka Itoobiya ee Addis Ababa.
Qoraal kasoo baxay Safaaradda Maraykanka ee Itoobiya, ayaa lagu sheegay in Maraykanku helay xogo muujinaya dibadbaxyo rabshado wata oo toddobaadkan dabayaaqadiisa ka dhici doona magaalada Addis Ababa, gaar ahaan xadka ay magaaladaasi la wadaagto gobolka Oromada.
Muwaadiniinta Maraykanka ayaa la faray in ay ka baaqsadaaan safarro aan daruuri ahayn oo ay asbuucan gudihiisa ku tagaan xarunta dalka Itoobiya ee Addis Ababa.
Shaqaalaha Maraykanka ayaa iyagana lagu amray in aysan ka bixi karin ama geli karin magaalada Addis Ababa ilaa laga gaaro bisha September 17keeda, amase ay safaaraddu wargelin cusub soo saarto.
Dadka ayaa loogu baaqay inay hareerahooda waxa ka dhacaya si dhow ula socdaan, islamarkaana ka fogaadaan isu soo baxyada iyo meelaha ay dadku ku badan yihiin.
Waa markii labaad intii lagu guda jiray sannadkan 2018 ee ay Dowladda Maraykanku muwaadiniinteeda uga digto in ay u safraan dalka Itoobiya, iyadoo digniintii tan ka horraysay soo baxday bishii February ee lasoo dhaafay.
Rabshado dhiig ku daatay ayaa horraanta bishii August ee lasoo dhaafay ka dhacay gobolka Oromada iyo midka Soomaalida ee dalka Itoobiya, markaas oo cutubyo ka tirsan ciidamada milateriga ee Dowladda Federaalka ee Itoobiya xoog kula wareegeen qaar kamid ah xarumaha dowladda ee Jigjiga.
Maamulka Jubbaland oo digniin u diray dadka taga deegaannada Al-shabaab
Madaxda Sucuudiga, Eritrea iyo Itoobiya oo Sucuudiga ku kulmaya